ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ထိုင်း အစိုးရ ရဲ့ ချီးကျူးဖွယ်ရာ လုပ်ရပ် တခု – Shwewiki.com
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ထိုင်း အစိုးရ ရဲ့ ချီးကျူးဖွယ်ရာ လုပ်ရပ် တခု
ဝူ ဟန်ပိုးကြောင့် အထိနာနေတဲ့ ခရီးသွားလုပ်ငန်း လုပ်နေသူတွေအတွက် အစိုးရဘဏ်တွေဆီက ချေးထားတဲ့ ငွေတွေအပေါ် အတိုး အရင်း ပေဆပ်နေရမှုကို ၆ လတာ ရပ်ဆိုင်းပေးမတဲ့။ ဂျက်လေယာဉ်တွေအတွက် လောင်စာဆီအပေါ် စည်းကြပ်တဲ့ အထူး ကုန်စည်ခွန်ကိုလည်း လျှော့ပေးမယ်တဲ့။
သည်အစီအမံတွေကို အင်္ဂါနေ့မယ် ဝန်ကြီးအဖွဲ့ကို တင်ပြီး အတည်ပြုမှု ရယူမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ထိုင်း ခရီးသွားလုပ်ငန်း အာဏာပိုင်အဖွဲ့က သည်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုကြောင့် သည်နှစ်ရဲ့ ပထမလေးလပတ်အတွင်း ပေါက်ဖော်ခရီးသွား ဝင်ရောက်မှု ၈၀ % (ခရီးသွားပေါင်း ၂ သန်း ၃ သိန်း ၂ သောင်း) လျော့သွားပြီး ဝင်ငွေအားဖြင့် ထိုင်းဘတ် ၉၈ ကုဋာ ဆုံးရှုံးနိုင်ချေ ရှိတယ်လို့ ဆိုလာပါပြီ။
သွက်ချက်ဗျာ…ပထမ ထိုင်းတွေရဲ့ ကျန်းမာရေးက အရေးကြီးဆုံး ဦးစားပေးကိစ္စပဲတဲ့။
ဒုတိယ သည်ရောဂါကြောင့် တိုင်းပြည်အပေါ် သက်ရောက်လာနိုင်မယ့် စီးပွားရေးအခြေအနေကို တွက်ဆပြီး အမြန်ဆုံး အရေးယူဆောင်ရွက်တာ…သြော်… အင်စထစ်ကျူးရှင်းရယ်တဲ့မှ ရှင်း.
ဝူ ဟနျပိုးကွောငျ့ အထိနာနတေဲ့ ခရီးသှားလုပျငနျး လုပျနသေူတှအေတှကျ အစိုးရဘဏျတှဆေီက ခြေးထားတဲ့ ငှတှေအေပျေါ အတိုး အရငျး ပဆေပျနရေမှုကို ၆ လတာ ရပျဆိုငျးပေးမတဲ့။ ဂကျြလယောဉျတှအေတှကျ လောငျစာဆီအပျေါ စညျးကွပျတဲ့ အထူး ကုနျစညျခှနျကိုလညျး လြှော့ပေးမယျတဲ့။
သညျအစီအမံတှကေို အင်ျဂါနမေ့ယျ ဝနျကွီးအဖှဲ့ကို တငျပွီး အတညျပွုမှု ရယူမယျလို့ ဆိုပါတယျ။ ထိုငျး ခရီးသှားလုပျငနျး အာဏာပိုငျအဖှဲ့က သညျရောဂါဖွဈပှားမှုကွောငျ့ သညျနှဈရဲ့ ပထမလေးလပတျအတှငျး ပေါကျဖျောခရီးသှား ဝငျရောကျမှု ၈၀ % (ခရီးသှားပေါငျး ၂ သနျး ၃ သိနျး ၂ သောငျး) လြော့သှားပွီး ဝငျငှအေားဖွငျ့ ထိုငျးဘတျ ၉၈ ကုဋာ ဆုံးရှုံးနိုငျခြေ ရှိတယျလို့ ဆိုလာပါပွီ။
သှကျခကျြဗြာ…ပထမ ထိုငျးတှရေဲ့ ကနျြးမာရေးက အရေးကွီးဆုံး ဦးစားပေးကိစ်စပဲတဲ့။
ဒုတိယ သညျရောဂါကွောငျ့ တိုငျးပွညျအပျေါ သကျရောကျလာနိုငျမယျ့ စီးပှားရေးအခွအေနကေို တှကျဆပွီး အမွနျဆုံး အရေးယူဆောငျရှကျတာ…သွျော… အငျစထဈကြူးရှငျးရယျတဲ့မှ ရှငျး.
“မြမြ” Red Carpet ပွဲ သို့ တက်ရောက်လာ တဲ့ သင် ဇာ ဝင့်ကျော်
မြန် မာနိုင်ငံတွင် ယခုအချိန် ထိ ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ် ပိုး ကူးစက်ခံရသူ လုံးဝမရှိသေးဟုဆို